Akụkọ - Otu esi eji mgbọ Bullet | OMYSIMBA
Bluetooth vibratorsbụ ihe eji egwuri egwu nwoke na nwanyị na onye ọ bụla chọrọ otu na nchịkọta ha. Ma ị bụ onye ọhụụ ma ọ bụ na ị na-eji ihe eji egwuri egwu mmekọahụ kemgbe ọtụtụ afọ, ha dị mma ịnwe ihe ndina akwa gị.
Y’oburu na ohuru n’egwuregwu egwuru-egwu nwoke, yabụ na ha bụ ebe ị ga-ebido. Ha bụ ndị nwere uche, ndị na-aba n’akpa uwe ma nwee ike zoro kpamkpam ma ọ bụrụ na ị na-echegbu onwe gị gbasara onye na-achọta ha.
Yabụ ọ bụrụ na ịchọrọ ịmatakwu banyere egwu ndị a dị egwu, lee n'okpuru ..
Gịnị Bụ Mgbapu Vibrator?
Otu mgbọ jijiji bụ otu n'ime ihe eji egwu egwuregwu ụmụaka. Obere na nha, a na-eme mkpọtụ iji nye mkpali na mpaghara dị egwu, gụnyere ọnụ na nipples ma ọ bụ ebe ọ bụla na-eche ọmarịcha.
Ha na-abatakarị n'ọtụtụ nha na-amalite obere na ọgụgụ isi. Ndị a dị mma maka mgbe ịchọrọ egwuri egwu nke dị mfe izobe! A pụkwara ịnụ ụtọ ogologo nke nsụgharị ndị a na-akpọ bullet vibrators dị ka ihe na-adọrọ adọrọ maka ndị na-achọ ịbanye. Ọ bụ ezie na ha pere mpe karịa ọtụtụ ndị ọzọ jijiji, ha bụ nhọrọ zuru oke maka ndị mbido na ndị na-achọ onye nwere uche, onye nwere ike ịma jijiji.
Etu esi eji igwe eji agba ọsọ
A na-ejikarị bọtịnụ na-ejikarị bọmbụ eme ihe site na iji otu bọtịnụ iji gbanye ngwaọrụ, gbanwee usoro na gbanyụọ. Mgbe agbanwuru vibrations enwere ike iji kpalie mpaghara dị egwu na maka mkpali clitoral. Bulfọdụ mgbọ nwere ike iji ọkọlọtọ otu ọsọ bịa ebe ndị ọzọ nwere ike ịbịa ọtụtụ ọrụ na ọsọ ọsọ ịhọrọ. Enwere mgbo maka onye ọ bụla!
Ọmarịcha mkpali maka mmụkọ ugwu
Iji nweta oke anụrị site na mgbo vibrator anyị ga-akwado iji ya mee ihe maka mmụba ikuku. Tinye ntinye nke mgbọ ahụ megide okpu mkpuchi gị ma megharia na okirikiri. Nyochaa ebe ị na-atọ ụtọ ma soro ihe ọ bụla masịrị gị.
Jiri solo ma obu ndi ozo
Bullets nwere ike ịbụ nnukwu mgbakwunye na mmekọahụ ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịme ihe na ime ụlọ. Jiri a mgbọ na gị na onye òtù ọlụlụ maka mmezi clitoral akpali akpali n'oge mmekọahụ.
Jikọta ụfọdụ lube
Nnukwu lube nwere ike ịkwalite ahụmịhe ọ bụla metụtara mmekọahụ. Jiri ya na mgbo mgbọ maka ihe ọzọ. Maka ezigbo gburugburu, anyị ga-akwado iji mmiri mmanu mmiri.
Were ya na mmiri ma ọ bụ saa ahụ
E nwere ọtụtụ mgbọ mmiri na-enweghị mmiri n'ebe ahụ ka ị wee nwee ike ịnụ ọchị karịa gị. Were ha na ịsa ahụ ka ị nwee ike ịnụ ụtọ ọ orụ ma ọ bụ jiri mgbo gị nwee obi ụtọ ịsa ahụ. Nke a pụtakwara na ha dị oke mfe ihicha. Anyị ga-akwado gị iji mmiri ncha dị ọkụ hichaa mgbo gị tupu na mgbe ị gachara.
Nchọgharị metụtara vibrator:
kacha mma wand
back wand ịhịa aka n'ahụ
ezigbo onye wand Massager